Manje sengifuna ukwakha iqembu labantu abafuna inhliziyo Yami ngokushesha okungenzeka, labo abakwaziyo ukucabangela imithwalo Yami. Kodwa-ke, angeke ngiyeke ukuhlambulula nokucwenga ibandla Lami; ibandla liyinhliziyo yaMi. Ngiyabazonda bonke abenza okubi abanivimba ukuba nidle futhi niphuze izwiLami. Lokhu kungenxa yokuthi kukhona abantu abambalwa abangangifuni ngokwangempela. Laba bantu bagcwele inkohliso, abasondelani Nami ngenhliziyo zabo yangempela, babi, futhi bangabantu abathiya ukwenziwa kwentando Yami; ababona abantu abenza iqiniso. Laba bantu bagcwele ukuzazisa nokuzidla, banezifiso ezinkulu, bayathanda ukwehlisa abanye, kanti namazwi abawakhulumayo ezwakala emnandi mawuwalalele, kodwa ngasese abalenzi iqiniso. Laba bantu ababi bazonqunywa bashanelwe basuswe; bazohlala ezinhlekeleleni. Lawa mazwi awokunikhumbuza nokunikhuza ukuze izinyawo zenu zibe sendleleni engiyihlosile. Buyelani njalo emoyeni wenu, ngoba ngiyabathanda labo abangithanda ngenhliziyo yabo yonke. Ngoba uma nisondela Kimi, ngizonivikela nginiphephise kwababi, ngizonenza ukuba nime niqine ekhaya Lami futhi nginilinde kuze kube sekupheleni.
Ababi Kumele Bajeziswe Izinto UPetru Abhekana Nazo: Ulwazi Lwakhe Ngokusolwa Nangokwahlulelwa Isahluko 2 Kubaluleke Kakhulu Ukuqonda Isimo SikaNkulunkulu